Beesha ku qanacsan halka Xildhibaan | allsanaag
Beesha ku qanacsan halka Xildhibaan
Maalintaan maqaalka qornay oo ahayd shan bil ka hor iyo maanta wax badan ayaa iska bedeli lahaa bulshada reer Maakhir haddii ay lahaan lahaayeen hogaan siyaasadeed iyo mid dhaqan . Maanta xalka qura ee jla gudboon bulshadda reer Maakhir waa in beel kasta oo Xildhibaan ku leh baarlamaanka Puntland ay dib ugu yeeraan Xildhibaankooda si ay wada tashi ula sameeyaan sida laga yeeli lahaa Halka Xildhibaan ee Aqalka sare ee beesha saamiga loo siiyey waxa uu ku salaysan yahay. Sababta Nus Mudug ah iyo gobolka Galguduud u heleen 8 Xildhibaan Halka gobolka Sanaag iyo nus ka mid ah gobolka Bari ay u heleen hal Xildhibaan
Maqaalkan bishii May ee sanadkan ayaan qornay Bulshada reer Maakhir intooda badan waa akhristeen.
Xildhibaanada Aqalka-sare ee Dowlada Fadaraalka Somaliya qaybta Puntland ay ka heshay ayaa gaaraya 11-xubnood.
Hadaba sida loogu qaybiyay 11-ka xildhibaan Beelaha Puntland ayaa ah sida tan:-
–Mudug:- 2-xubnood,Xubin Leelkase ah iyo xubin Majeerteenka Mudug ah .
–Nugaal:- 3-xubnood oo Majeerteen ah
–Bari :-3-xubnood,xubin Cismaan Maxamuud oo Majeerteen ah,xubin Cali Saleymaan oo Majeerteen ah iyo xubin Dishishe ah.
–Sool :-2-xubnood.labada xubnood waa Dhulbahante.
–Sanaag:- 1-xubin Beesha Warsangeli
Isu gayn Tirada Guud Waa 11-Xubnood.
Xaq Darada ugu Weyn ee Xubnahan loo qeybiyey ayaa ah In Beesha Majeerteen oo Keliya ay heshay 6-Xubnood,halka Beelaha Warsangeli oo degta sadex degmo ee gobolka Sanaag iyo galbeedka gobolka Bari ay heli doonaan hal Xildhibaan
Qaabka Xubnahan loo qeybiyey ayaa la oran karaa Waa Mid ku Salaysan Qaabkii Xaqdarada ahaa ee 1998 Xubnaha Baarlamaanka Puntland loo qeybiyey taas ay Beesha Majeerteen ay qaadatay 33 kursi halka intii soo Hartayna Beelaha Puntland dega si xaqdaro oo aan loo meel deyin loogu qeybiyey.
← Caalamku Dumar ayeey u baahan yihiin Jowhar iyo Beledweyn oo labo Dastuur kala yeeshay →